स्वास्थ्यमन्त्रीलाई जे गर्दा नि छुट, विनानिम्तो स्वकीय सचिवसहित सात कर्मचारी लगे जेनेभा « Janata Times
काठमाडौं, जेठ ८ । मुलुकमा डलर अभावले आर्थिक संकटमा फस्ने अवस्था देखिएको बेला स्वास्थ्य मन्त्री र कर्मचारी भने कामविना नै विदेश सयरमा निस्किनु भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका १० कर्मचारीको टोली विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को साधारणसभामा भाग लिन भन्दै स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा गएको हो ।
स्वास्थ्यमन्त्री बिरोध खतिवडासहित तीनजनाका लागि मात्रै औपचारिक निम्ता भए पनि मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीदेखि मन्त्रीका स्वकीय सचिवसमेत थप सातजना जेनेभा गएका हुन् । डब्लुएचओको ७५औँ साधारणसभा आइतबारदेखि शनिबारसम्म सात दिन जेनेभामा हुँदै छ ।
सम्मेलनका लागि डब्लुएचओले स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्यसचिव र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको नाम र टिकट मात्रै पठाएको छ । स्वास्थ्यसचिव डा. रोशन पोखरेलले निम्ताबाहेकका कर्मचारी पनि टोलीमा रहेको स्विकार गर्नुभयो
। उहाँले सो निर्णय स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले गरेको बताउनु भयो ।
स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्यसचिव र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकबाहेक विभागको समन्वय महाशाखा प्रमुख डा. संगीता मिश्रा, प्रशासन शाखा प्रमुख मदन भुजेल, गुणस्तर मापन महाशाखा प्रमुख डा. मदन उपाध्याय, योजना महाशाखाका उपसचिव प्रकाश अधिकारी भ्रमण टोलीमा हुनुभन्छ । त्यस्तै, निक सिमोन्स इन्स्टिच्युट (एनएसआई)का वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबन्धक कासिम साह, मन्त्रीका निजी सचिव मधु मिजार र स्वकीय सचिव सुरज थापा पनि टोलीमा सहभागी हुनुभएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार उक्त भ्रमणमा एकजनाको दैनिक खर्च दुई सयदेखि दुई सय ५० डलर हुन्छ ।
हाल आर्थिक संकट व्यहोरिरहेको बंगलादेशले सबै सरकारी अधिकारीलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ । भ्रमण स्वीकृत भएका अधिकारीको पनि रद्द गरेको छ । तर, स्वास्थ्यका कर्मचारी भने डब्लुएचओको सम्मेलनका नाममा घुम्नका लागि विदेश गएका हुन ।